Arsenal oo isku diyaarinaysa inay £30m ku soo qaadato laacib khad dhexe oo ka tirsan kooxda Paris Saint-Germain – Gool FM
(London) 27 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa inay isku diyaarinayso inay xagaagan dalab 30 milyan oo gini ka gudbiso laacibka khadka dhexe ee Christopher Nkunku.
The Gunners ayaa si xoog leh loola xiriirinayay inay u dhaqaaqo soo xero-gelinta Nkunku suuqii kala iibsiga xiddigaha ee bishii Janaayo, halka sidoo kale lagu soo waramayay inay isha ku hayeen 21-sano jirkaan isbuucyadii dhowaa.
Sida uu warinayo warsidaha Paris Team, Nkunku ayaan ku faraxsanayn inuu u ciyaarayo kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska, Arsenal ayaana rumeysan inay kaga filan tahay 30 milyan oo gini si ay kooxda xafidanaysa horyaalka Ligue 1 uga soo iibsadaan laacibkan dhammaadka kal ciyaareedkan 2018-19.
Nkunku ayaa soo maray nidaamka dhallinyarada ama da’yarta ee Les Parisiens, waxaana uu tan iyo markaas kooxda koowaad ee PSG u saftay 73 kulan.
Xilli ciyaareedkan xiddiga reer France ayaa dhaliyey saddex gool, waxaana uu sameeyey labo caawin 18 kulan oo uu ciyaaray horyaalka Ligue 1.
Kooxda Manchester United oo aan Paul Pogba u ogolaan doonin inuu tago